Qalabka Sawirada Qodobka ugu Muhiimsan ee Sawirada ee loo yaqaan 'Captalt'
Sawirro sawir, oo loo yaqaano duubista webka, ayaa kaa caawin doonta si toos ah qoraallada, sawirada iyo noocyada kale ee ka kooban bogag kala duwan. Khabiirada qoraya barnaamijyada noocaan ah waa in ay la macaamilaan macaamiish badan oo ka kala socda dhammaan qaybaha aduunka, taas oo ah sababta ay u samaysay qalab macdan qodaya oo kala duwan si loo helo xogta ugu fiican ee ka baxsan. Xitaa qaar ka mid ah shirkadaha ugu caansan uguna caansan caalamka waxay ku kalsoon yihiin aaladaha sawir-qaadista si ay u soo saaraan macluumaad faa'iido leh shabakadda. Qaybta ugu fiican waa barnaamijyadaas loo isticmaali karo maalin kasta, asbuuc, ama bil kasta iyada oo aan dhibaato jirin - commercial vehicle values guide. Isticmaalka barnaamijyada ama qalabka wax lagu qoro ee qaar ka mid ah guryaha, waxaad xogtaada ka heli kartaa boggag kala duwan oo u siisa macaamiishaada qaab kasta. Qalabkan xayeysiinta ah waxay ku jireen horumarinta sanadaha, waxaana hadda la wareegi karaa website-yo badan oo wata. Iyadoo la adeegsanayo, waxaad maareyn kartaa mashaariicda badan oo laga soo saari karo goobo badan oo aad rabto. Waxaa intaa dheer, waxaad kaydin kartaa xogta laga helay qaabka API ama CSV.
Screen Scraping Tools kuwaas oo badbaadin kara dareemayaasha iyo waqtigaaga
Qalabka hoos ku xusan ee afar geesoodka ah ayaa badbaadin doona labadiinaba iyo tamarta aad inta badan ku qarashgareysid xogta:
Waa mashruuc kale oo xoog leh oo cajiib ah. Waxay badbaadin kartaa taariiqda xogta waxayna u habeyn kartaa isticmaalka offline. Waxaad isla markiiba ku dhejin kartaa cinwaanka Kimono Browser oo u beddel xogta aan haboonayn ee qaababka CSV ama JSON.
Sawirrada sawirku waa mid ka mid ah farsamooyinka ugu muhiimsan ee socdaalka. Waxay awood u leedahay in aan si fiican u adeegsano barnaamijyada casriga ah. Waa ammaan in la yiraahdo waxaa jira farsamooyin kala duwan oo lagu abuurayo loona kaydiyo xogta, laakiin waxba ma ka fiican yahay qalabka wax lagu qoro. Qeybta ugu fiican waa in software noocan ah la shaqeeyaan dhammaan daalacashada webka, oo ay ku jiraan Chrome, Firefox iyo Internet Explorer. Waxaa sidoo kale lagu dari karaa tiknoolajiyada Flash iyo Silverlight, iyo sidoo kale codsiyadaada ganacsiga sida Siebel, PeopleSoft, iyo SAP.